China Flat Square & Round Bottle Labeling Machine Manufacture neFactory |S-conning
inoshandiswa zvakanyanya kune Flat Square Round Bottle
Makumi emakoreyekunaya kwehunyanzvi, kugadzirisa kusingaperi uye kuvandudzwa, S-conning yakagadzira S322 iyi inoshanda zvakanyanya kuti ishandiswe kuFlat Square Round Bottle uye midziyo yakagadzikana mumishonga, chikafu uye zvinwiwa, uye mazuva ese maindasitiri emakemikari.
S-conning yakasarudzika yepamberi otomatiki yekuona ichanyatso kudzivirira bhodhoro kutendeutswa, zvimiti zvisipo, kunamatira zvisizvo, kutumirwazve uye zvimwe zvinhu.Deredza chikanganiso chekudhinda.
Kutumira & kuunganidza mudziyo une sarudzo yekugovera (kuunganidza) matireyi anochinjika kwazvo kubatanidza nemutsara wekugadzira, iyi yakazara otomatiki yekurongedza muchina ichikupa iwe kuchinjika, kuwanda, kuenderana.
Isu tinongotora yakanyanya hunyanzvi uye yakagadzikana chikamu chemagetsi, tichikuvimbisa iwe kuchinjika, hunhu, kuenderana.
Optional Kudhinda midziyo inochinjika inoenderana neinopisa yekudhinda printa, inopisa kudhinda muchina kana ink-jet printer, dhinda uye shandisa otomatiki labeler yekubatanidza.
Iyo Nyeredzi vhiri yekumisikidza dhizaini yeCylindrical-shaped positioning uye clamping, yakaomesesa dhizaini matatu mapoinzi roller yekumisikidza yakatenderedza bhodhoro rekunyora muchina inovimbisa kunyora chaiko, kukwirisa iyo yakanyorwa chaiyo nzvimbo.
Isu tinopawo iyo yekuona yekuona: dzivirira kuvuza label, zvisirizvo label, kudzokorora label, incline label uye mibvunzo isina kujeka yekudhinda kodhi.
1) Label applicator kuve neiyo Yepamusoro mhando servo mota.
2) Bhodhoro shoma kana inverted yekuona bhodhoro sensor.
3) Yekutanga Swiss Emery roller yekubatsira kutyaira iyo label applicator.
4) Yakakwirira chaiyo Nyeredzi vhiri matatu poindi yekumisikidza kunyora.
5) Silicone inobata label roller.
6) HMI yekubata sikirini.
7) Yese France neGermany brand magetsi kumisikidzwa.
8) GMP yakajairika Aluminium alloy Stainless simbi kabati.
9) Uyewo shandiswa zvakanyanya kune Flat Bottle Labeling Machine.
1 Speed Flat bhodhoro≦200 zvinhu zvakanaka/miniti Inoenderana neBhodhoro saizi, Label Saizi uye kukurumidza kwekudya
8 Label roll mukati dhayamita: 76mm,kunze dhayamita: 350mm
Zvakapfuura: S-322 nyeredzi mbiri vhiri vhiri bhodhoro rekunyora muchina
Zvinotevera: Carton / Bhokisi Pamusoro uye Pazasi Surface Labeling Machine
Commercial Bottle Labeling Machine, Syringe Assembly uye Labeling System, Sticker Labeling Machine Manufacture, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Plastiki Chisimbiso Machine, Printer For Cosmetics Jars Bottles,